A Comment and My Thought | ကိုသင္ကာ . . . . Ko Thinker
← Old Hand Journalist Myanma Alinn Than Nyunt Pass Away
A Note on the Development of the Burmese Language →
December 26, 2008 · 9:41 am
A Comment and My Thought
မနေ့က ခရစ္စမတ်ပါတီသွားတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းအသောက်မဆင်ခြင်တော့ မနက်မှာ လူက မလန်းဘူး။ မေးလ်ဖွင့်လိုက်တော့ ဘလော့ဂ်ကော်မန့်မေးလ်တစ်ခုရောက်နေတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ ပို့စ်ရေးစရာရတယ်။ အဲဒီကော်မန့်က အခု ဖော်ပြထားတဲ့ဟာပဲ။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ ကော်မန့်ပေးရင် ဘလော့ဂ်လိပ်စာနဲ့ လျှပ်မေးလ်ထည့်ရမယ်လို့ Option ခံထားတယ်။ ကော်မန့်ရှင်က မေးလ်နေရာမှာ “အစိုးရပိုင်းက”လို့ ခြေရာချထားတယ်။ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ အမည်မဖော်ပြတဲ့အတွက် မကဲ့ရဲ့လိုပါဘူး။ ကြိုဆိုပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ကျနော့်ရဲ့ လေကြီးလေကျယ်တွေကို မကြိုက်တဲ့ ကျနော်နဲ့သိတဲ့ သူထဲကပဲ ထင်ပါတယ်။
ကျနော်အရင် ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာ ကလောင်ခွဲတွေနဲ့ ဝေဖန်ရေးတွေ ရေးဖူးတယ်။ ရေးသမျှထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်စရာတချို့ ရှိခဲ့တယ်။ တစ်ပုဒ်ကိုအကြောင်းပြုပြီး တရားစွဲဆိုမယ့် ကြေညာချက် သတင်းစာမှာပါလာတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ ကျနော့်ဘက်က ရပ်တည်ပေးတဲ့ စာရေးဆရာနဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေရှိလို့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ခါ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဝေဖန်တော့ စာရေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ရစရာမရှိအောင်ကြိမ်းဝါးခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ သိက္ခာသရဖူကာကွယ်ပွဲမှာ ကျနော်က နားထောင်နေပေမယ့် သူ့ကို ကလိခဲ့တာ ကျနော်လို့ သူမသိရှာဘူး။ ခုထိလည်း အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှတပါး ဘယ်သူမှ မသိဘူး။ သူများကို ရိတိတိဝေဖန်ရမယ်ဆို ကျနော်က သိပ်ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ အဲဒီအကျင့်ကို အလိုလိုက်ပြီး ရေးခဲ၊ ပြောခဲပါတယ်။ သူများတွေ မခံချိမခံသာဖြစ်တာ တွေ့ပြီးရင် “ကိုယ့်အလှည့်လည်းပြင်ထား”လို့ သတိပေးထားရတယ်။
ကိုင်း သူပြောခဲ့တာကို ပြန်ကောက်လိုက်ဦးမယ်။
(က) “သူများကို ကျမ်းလိုက် မဖတ်ဘူးလိုဆိုပြီးတော့ တီးထားတာ တွေ့ရတယ်ဗျ” တဲ့။ ဟုတ်တယ် တီးထားတယ်။
(ခ) “ဒါပမေယ့် မိတ်ဆွေက အလုပ်နဲ့ အပြော မညီဘူးဖြစ်နေတယ်”တဲ့။ ရုတ်တရက် ဘာကို ထောက်ချင်တာလဲဆိုတာ မသိဘူး။ အောက်မှာ ဆက်ရေးတာကို ထောက်ချင့်ပြီး ကျနော် Reference တိတိကျကျမပေးနိုင်တာကို ဆိုလိုချင်တယ်လို့ မှတ်ယူရတာပဲ။
(ဂ) ကျနော်စာအုပ်နာမည် အတိအကျ မမှတ်မိတာ၊ ထည့်မရေးတာကို အပြစ်တင်ထားပါတယ်။ ဘာလို့ မထည့်နိုင်သလဲဆိုတာ ဘလော်ဂါ အပေါင်းအသင်းတွေက နားလည်ပြီးသားပါပဲ။ သူက ထောက်တော့ ပြောရပါဦးမယ်။ ကျနော့် စာအုပ်စင်က ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်က ပြည်ပမှာ ရောက်နေတာ နှစ်နဲ့ ချီနေပြီ။ ဒါကြောင့် မကိုးကားနိုင်၊ မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ သယ်လာသလောက်က အဘိဓာန်တချို့နဲ့ ကျောင်းစာနဲ့ ဆိုင်တာတွေပဲ။ မကိုးကားနိုင်ရခြင်းကတော့ ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အကြောင်းအရာ မှတ်မိနေရင် ကျနော် ဖတ်ဖူးလို့ပြောတာဆိုတာ သိနိုင်နေတာပဲ။
(ဃ) Harvard Referencing (သို့) Chicago Referencing သုံးပြီးလုပ်ပါတဲ့။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာ ပို့စ်ရေးပြီးမှ ဂူဂယ်မှာ ရှာကြည့်ရပါဦးမယ်။ တစ်ခုပြောချင်တာက ကျနော့် ဘလော့ဂ်ပို့စ်ရေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနကျမ်းနေတာ မဟုတ်လို့ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်၊ အောက်ခြေမှတ်စုတွေ ထည့်မနေပါဘူး။
(င) အလိုလိုသိသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲထားတော့ ကိုယ်ရေးတာ ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်။ ဆရာကြီးလေသံပေါက်နေလို့ သောက်မြင်ကပ်ပြီးပြောပုံရတယ်။ ကျနော့်ကို သောက်မြင်ကပ်ကြတာ အဲလို လေလုံးထွားလို့ပါပဲ။ ဘုရား ရဟန္တာမှတစ်ပါး ဘယ်သူမှ အလိုလိုမသိနိုင်ပါဘူး။ လေ့လာ သင်ယူရတာပါပဲ။
(စ) အဘိဓမ္မာ ဘုရားဟောဘူးလို့ ကျနော် ကြောက်အကန် မပြောခဲ့ပါဘူး။ ပညာရှင်များ ပြောခဲ့တဲ့ စဉ်းစားဖွယ်ရှိတာတွေကိုသာ ပြန်ဖောက်သည်ချတာပါပဲ။ အဘိဓမ္မာ ဘုရားဟောမဟောဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်တွေကို “သမိုင်းကိုလှန် သုတေသနပြုနေမယ့်စား ​လေးနက်တဲ့ အဘိဓမ္မာကိုဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာ ဒီတရားမျိုးဟောနိုင်တယ်ဆိုတာ သိလိမ့်မယ်”ဆိုတဲ့ အဘိဓမ္မာကို ရှေ့နေလိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ထောက်ပြချက်ကို ကျနော်က ပိုသဘောကျခဲ့တဲ့သူပါ။
(ဆ) လူသေလူဖြစ် ဝိနိစ္ဆယတောင် သင်ကာဖတ်ဖူးပုံမရဘူးလို့ သူထင်ထားပုံရပါတယ်။ သာသနာတော်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရဏတွေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်း သာသနာရေးဦးစီးဌာနက တစ်အုပ်စီ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာတွေ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဌ လူသေလူဖြစ်ရေးခဲ့တာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အမျိုးသားရေး ဝါဒ ဘယ်လို ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာသာ ဆည်းပူးမေးမြန်းပါဦးလို့ ပြန်တိုက်တွန်းပါရစေ။ ပြီးတော့ လူသေလူဖြစ်ဟာ ဆရာတော် ရှင်ဥက္ကဌရဲ့ အိုင်ဒီယာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်တစ်ယောက်ရေးတဲ့ အီဗော်လူးရှင်းဆိုင်ရာ အနုမာန မှန်းဆချက်စာအုပ်ကို မှီးပြီးရေးတာပါ။
(ဇ) အဲဒီ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဦးအေးမောင်နဲ့ ဥပသကာ၏ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြတ်ထွက်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျနော်က အလှတရားကို ရက်ရက်စက်စက် ဝေဖန်ခဲ့ပေမယ့် သူက စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် အွန်လိုင်းမှာ ခင်သွားကြပြီး တရာဓမ္မ၊ စာပေရေးရာ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်ရေးရာတွေ ဆွေးနွေးဖော်ဆွေးနွေးဖက်ဖြစ်ခဲ့ကြတာ၊ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ခုရေးနေတုန်းတောင် သူ အွန်လိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။
0 responses to “A Comment and My Thought”
Thank you. Blogger is now clean. Use your own fucking cheap domain.